Ny kajy ny boky ny earthwork excavation ho
Kajy ny boky ny earthworks
B - ny halalin'ny excavation
Y - ny lavany ny lavaka
X - ny sakan'ny ny lavaka
Construction earthworks - no nandavaka ny fototra lavaka, dobo filomanosana na dobo, ny lavaka ho an'ny firenena mahaleotena trano sewer, rafitra na rano nalatsa-trano bongony.
Amin'ny fandaminana ny excavation Tena zava-dehibe ny hijery ny boky ny Nihady tany.
Ny vidin'ny excavation dia ahitana excavation ny lavaka sy ny na ny fanesorana ny tany. Ilaina ny drafitra ny hetsika ny topsoil sosona ny tany ho an'ny ho avy fampiasana tao amin'ny saha na zaridaina. Tsy fiterahana ny tany ampiasaina leveling ny toerana, lamba firakotra tamberina fototra na nesorina-toerana. Places ny fanesorana ny tany dia tapa-kevitra mialoha.
Mariho ihany koa fa ny saram ho ny nihady ny 1 metatra toratelo matetika dia mampitombo ny halalin'ny ny asa. Koa satria ny vidiny tsy ho etỳ ambonin'ny tany amin'ny halalin'ny 1 metatra sy 1 metatra lalina sy Mety tsy hitovy mihitsy aza indroa. Mifindra ny tany dia matetika misy zavatra misaraka ny fandaniana. Mba tsy hiharan'ny tsy nampoizina ny fandaniana, nametra mialoha rehetra amin'ny 'ilay orinasa.
Diniho tahirin-excavation ny formwork rehefa mandraraka ny fototra.
Hand na backhoe?
Tsirairay ireo dia manana ny fomba mahatsara sy maharatsy ny mifampiresaka.
Rehefa miasa tanana lavaka azo atao marimarina kokoa.
Amin'ny vidiny ambany-asa, ary kely fotsiny ny vola lany amin'ny famokarana farany amin'ny tanana dia mety ho kely excavation noho ny fanofana ny excavator sy ny milina hafa. Mora kokoa ny fampiharana ny fanaraha-maso ny habeny sy ny rafitsary ny lavaka.
Na izany aza, raha toa ka manan-danja be ny tany sy ny hafainganam-pandehan'ny ny backhoe dia matetika mandresy. Na ahoana na ahoana, ny fanapahan-kevitra ho anao.
Fomba fitsaboana ny earthworks.
Fisehon'ny ny lavaka.
Voalohany dia mila ny marika toerana ao an-davaka, na hady kely. Mba hanaovana izany, amin'ny tany tsimany ary ny tady manify manondro ny toerana ny asa. Mifehy ny rafitsary diagonals roa dia refesina ny hoavin'ny ny lavaka - tsy maintsy mitovy.
Na izany aza, izany dia fomba matihanina ary mety tsara ny fanaovana marika lavaka na somary fisaka tany.
Fa marina kokoa earthworks endrika ny teknolojia manaraka.
Tamin'ny lavitra ny sasany avy amin'ny tolo-excavation hazo nihady tsanganana, ao amin'ny vondrona ny roa (castoffs). Izy ireo hametaka ilay birao mitsivalana, izay mitarika kofehiny. Boards miezaka hamaha mitovy lenta amin'izy samy izy.
Raha mifindra tady, hanatratra manamarika marina. Ireo nanipy-offs amin'ny hoavy sy ny fampiasana ny voafaritra tsara fototra esory formwork.
Manamora ny asa mafy sehatry, theodolite, tamin'ny laser kasety na tamin'ny laser anivon'ny fepetra.
Amin'ny saha na malemy be excavation halalin'ny Diniho tsara ny amin'ny fiarovana ny excavation. Amin'ity tranga ity, ny rindrina aza ny lavaka tsy tena mitsangana, fa miaraka amin'ny fitongilanana - mba tsy ny fandatsahana ny tany.
Lafiny sy ambany ny sehatra fanaraha-maso ny lavaka sy ny lalamby ny fotoana ela Izy.
Fa marina zoro ny 90 degre misy fandraisana iray. Telozoro amin'ny lafiny 3:4:5 metatra (na amin'ny lafiny izay multiples ireo isa) dia manana mari-pahaizana 90-zoro. Nandry tamin'ny lafiny iray amin'ny zoro ny 3 metatra, eo amin'ny hafa - 4 sy ny elanelana eo ny hevitra dia tsy maintsy ho katroka 5 metatra.